သငျသညျ Die ပြီးနောက်သမ္မာကျမ်းစာကပြောအဘယျသို့ဖွစျသှားသလား
ခရစျတျော Accept တစ်ခုဖိတ်ကြားလွှာ
ဘော့ Stern ကအားဖြင့်ကိုးကွယ်
Gettysburg အမျိုးသားဥယျာဉ်, PA
သည် Stony Brook
Inspirational Writings ကိုဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
ကောင်းကင် - ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရနေအိမ်
Souls for Photos (၀ ဘ်ဆိုဒ်များ) သည် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်သူများကိုယုံကြည်သူများအားကယ်တင်ရန်နှင့်ဘုရားသခင့်အဖို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူများအတွက်အထူးသဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရန်ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဝေးလွန်းသည်ဟုခံစားရသူများဖြစ်သည်။
ဤ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင့်ကောင်းချီးကိုတောင်းခံရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်သူများ၏နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရန်၊ သူတို့၏ဘ ၀ များပြောင်းလဲသွားစေရန်၊ သူတို့ထံသူနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်သင်၏ဆုတောင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လိုချင်သောအဖြစ်နေထိုင်ရန်နှင့်သဘာဝဓာတျပုံမြားနှငျ့တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးအရေးအသားကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု browse ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းစာစောင်များ၊ ကဒ်များစသည်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်းရှိမည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမဆိုကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများပြုလုပ်ရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ link ကိုထည့်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဧဝံဂေလိတရားပျံ့နှံ့မှုအတွက်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ ပူးပေါင်း. ၌သင်တို့၏ထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သငျသညျဝိညာဏလမ်းညွှန်မှုကိုဆက်သွယ်ပါလို, ဒါမှမဟုတ်စောင့်ရှောက်မှုဖွင့်အတိုင်းလိုက်နာဘို့မယ်ဆိုရင်, photosforsouls@yahoo.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးသားဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဆုတောငျးခတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ထာ၌သငျတှေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်!
အသက်ဝိညာဉ်ကိုမူပိုင်ခွင့်© 2018 ဓါတ်ပုံများအဆိုပါတစ်ခုဝန်ကြီးဌာနကဖြစ်ပါသည် Wellsville သမ်မာကမျြးဘုရားကျောင်း